Custom Printed Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 20 Products for Custom Printed Box)
Sunglass inorongedza zvipo bhokisi nerine sirivha
Sunglass inorongedza zvipo bhokisi nerine sirivha Sunglasses bhokisi chipo, akanaka anotarisa mabhokisi anogona kuve echipo akatakura, anodonha uye anopenya. Sirika magirazi ebhokisi, riine sirivha kukanya, ita kuti mabhokisi awedzere kutaridzika. Packaging bhokisi masokisi, magirazi bhokisi, kurongedza zvigadzirwa...
Yakakosha kadhibhodhi cosmetic yekuisa bhokisi nevharo
Yakakosha kadhibhodhi cosmetic yekuisa bhokisi nevharo Kadhibhodhi Kodhiidhi, Bhokisi rekushongedza bhokisi rine lid . Rakakosha cosmetic Bhokisi, rinokosha bepa rine logo rakadhindwa uye hunyanzvi pepa ruvara rakadhindwa, yepamusoro uye yakanaka. Cosmetic Bhokisi neInisa, zvipo kurongedza cosmetic bhokisi ine fosi...
Pepa chipo kurongedza dhiza bhokisi newindo
Pepa chipo kurongedza dhiza bhokisi newindo Dhizaina mapepa emabhokisi, chengetedza tuck bhokisi rine dhirowa bhokisi rekuvhara kunze, yakakosha dhizaini. Pepa bhokisi rine hwindo, bhokisi rine PVC hwindo, rinogona kuratidza zvigadzirwa zvako mushe. Tsika yepepa dhiza dhiza, hiqu mhando kudhinda uye zvinhu,...
tsika yemagineti zvigadzirwa zvigadzirwa kurongedza bhokisi neEVA
Packaging: yakarongedzwa muA = A / K = K yakaomeswa mabhokisi ekunze
tsika yemagineti zvigadzirwa zvigadzirwa kurongedza bhokisi neEVA Iri bhokisi nderetsika magineti ekupeta bhokisi, iyo Eva furo yekuisa inogona kuchengetedza zvigadzirwa zvako chaizvo, haufanire kunetseka nezvekukuvara panguva yekufambisa. Saizi, ruvara uye pateni zviri kwauri, tinogona kuzadzisa zvaunoda. Liyang Pepa...
Yevhudzi reVhudzi reVhudzi Sutu Bvudzi Kisimusi Chipo Chipo
Yevhudzi reVhudzi reVhudzi Sutu Bvudzi Kisimusi Chipo Chipo Yakasarudzika Wholesale Packaging Kadhibhodhi Pepa Chipo Bhokisi Yevana hairpin Suit Bvudzi Shongedzo Musikana Kid Kisimusi Chipo Mhete Bhokisi. Kugadzirira kwakanyanya kweKisimusi.
Fancy tsika yeyero chipo squarebox Kisimusi
Packaging: yakarongedzwa muA = A / K = K yakaunganidzwa mabhokisi ekunze
Fancy dhizaini kudhinda diki yeyero chipo kurongedza bhokisi reKisimusi chipo bhokisi kurongedza Iri bhokisi bhokisi chivharo nechigadziko rakasiyana ruvara, rinoshandiswa kuvana panguva yemumwe mutambo, mukati unogona kuiswa zvihwitsi, toyi, apuro nevamwe, kana iwe uchigona se
Wholesale Custom Retail Logo Yakadhindwa Yakasarudzika Round Kenduru Mabhokisi
Packaging: K = K Makoroti Makadhi Bhodhi Makatoni Ekurongedza
Wholesale Custom Retail Logo Yakadhindwa Yakasarudzika Round Kenduru Mabhokisi kubva kunze yakanyanya classical uye yakashongedzwa yakatenderera bhokisi, kunze iro girini pepa kudhinda iyo yegoridhe pateni inogadzira yakazara bhokisi chaizvo specail senge girini sango zvakare unzwe chirimo chichiuya, kana iwe uchida...
Dhirowa Sleeve inotsvedza Custom Bow Tie Bhokisi
Packaging: yakarongedzwa muK = K yakagadziriswa mabhokisi ekunze kana sekuenderana nezvinodiwa nevatengi
Dhirowa Sleeve inotsvedza Custom Bow Tie Bhokisi Yakasarudzika Bow Tie Bhokisi, uta tai kurongedza bhokisi ine yakakosha dhizaini. Bhokisi reTi, tayi bhokisi kurongedza, tsika yakadhindwa logo uye ruvara, ichasangana nezvaunoda. Sliding Bow Bow Tie Bhokisi, dhirowa bhokisi reuta uta, inotsvedza bhokisi nedhirowa,...
Custom logo chena pilo bhokisi re underwear
Custom logo chena pilo bhokisi re underwear Ichena yepiro bhokisi re underwear rakagadzirwa nepi art. Iyo pilo bhokisi inogona kuve yakajairwa saizi, ruvara, logo. Kumusoro kupera kuchave matte kana kubwinya kana banga UV etc. Iyi yakanaka uye isingadhuri sarudzo sechipo chekirisimasi, mwaka yekukwazisa. Chimiro...
Dhizaini Yakagadzirwa Yakapetwa Packaging Mabhokisi eCustom Logo
Dhizaini Yakagadzirwa Yakapetwa Packaging Mabhokisi eCustom Logo Yakakomberedzwa Dhizaini Yakadhindwa Mabhokisi eCustom Logo ane embossed logo . Tsika Pepa Chipo Bhokisi rezvipo kurongedza, yakasarudzika dhizaini uye yakanaka mhando . Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani iri...
Yakakwira yekutengesa Eco-inoshamwaridzana pitsa bhokisi pizza neCustom
Yakakwira yekutengesa Eco-inoshamwaridzana pitsa bhokisi pizza neCustom Iri bhokisi rekudya, iro rinogona kubata chikafu chakasimba senge hamburger, mazai tart, bhisikiti, ham, nezvimwe zvinowanzoshandiswa nemamwe mabheka uye nezvitoro zvekudya. Kudhinda kwepasi kuri kutsva kwazvo . Chidimbu chimwe chakaiswa bhokisi,...
Horo Yekudhara Zvishongo Bhokisi neCustom Logo Yakadhindwa
Horo Yekudhara Zvishongo Bhokisi neCustom Logo Yakadhindwa Iyo yakanakisa zvishongo bhokisi yakaiswa bhokisi rakakodzera pamutsipa, chidhindo, chindori, mhete kurongedza. Iyo yakasimbisa mapurasitiki hinge zvishongo bhokisi. Hwemhando yepamusoro neyakagadzika silika inomira mubhokisi. Tinogashira magadzirirwo akaitwa...
Custom simba bhodhi kadhi kadhi bhokisi ne inlay
Rose foil chitambi chebhokisi bhokisi remagetsi accessories iyoPopular tsika yemagetsi bhangi kadhibhodhi Chipo bhokisi ine inlay yakasviba mameseji uye goridhe foil chitambi kunze ne chena mukati, iyo iri gobvu iri 1200gsm pepa, Nice simba bhangi Packaging Bhokisi rinogona kubata nemutengi wako maziso, isu zvakare...
Chikafu cheganda dema macraf box
Chikafu cheganda dema macraf box Iyo yakasviba macraf bhokisi bhokisi yakasvibira yemavara art pepa, Iyo yakagadzirwa neye nhema chevhu pepa inowanikwa, dema dema rakadhindwa mechi yakagadziriswa logo logo, Zvese zvinotaridzika zvakakwana! zvese zvakagadziridzwa kana iwe uchifarira chikafu chegadhi macaron bhokisi,...
Anobuditsa Dhigirii Slider Matte Matema Watch Box
Kupa Mazano: 1000000pcs/month
Anobuditsa Dhigirii Slider Matte Matema Watch Box Matte dema yekutarisa bhokisi yakagadzirwa neyakajeka matte dema pepa iro pepa bhodhi ukobvu 1.5-2.5mm zvichienderana nehukuru hwebhokisi Bhokisi uye rako raunoda; Watch bhokisi mudhirowa yemasiraidhi magadzirirwo dema ruvara blackground pamwe Logo kupenyerera kumugumo...
Pepa Corrugated Pizza Bhokisi neCustom Logo Yakadhindwa Pizza bhokisi ine tsika logo yakadhindwa yakaomeswa neyakaomeswa brown kraft yakagadziriswa pepa bhodhi iyo yakasimba mapepa zvinhu mapepa0.5-1mm ; Iyo Pizza bhokisi yakadhinda yako yega brand uye logo . Piza yekutumira bhokisi yakagamuchirwa yakagadzirirwa saizi...
Rigid Tool Part Packaging Corrugated Shipping Boxes Rigid rakasvibiswa bhokisi rakagadzirwa rakaomeswa brown kraft dhiriini pepa bhodhi iyo yakasimba mapepa zvinyorwa sutu yekutakura kutakura ; Iyo yakasarudzika mabhokisi ekutumira mabhokisi akasimba mapepa ezvinhu zvekushandisa kutakura uye kutumira . Tool kurongedza...
PU yeganda reCustomerbookbook neElastic Band Ribbon
PU dehwe reCustomerbookbook neElastic Band / Ribbon Tsika Yekudzidza Chikoro, bhuku remudzidzi rine mhando yepamusoro. Bhuku reChikoro, bhuku rekuchikoro rechikoro remudzidzi, Eco ane hushamwari. Bhuku reRibbon neRibbon, uye neribhoni, rinoratidzika kunge rakagadzikana uye rakanaka, rakakurumbira nevadzidzi. Tsvaga...
Yakadhindwa Nhare mbozha Bhokisi nehuputi
Chipo kurongedza bhokisi chokoreti truffle praline bhokisi